10 ofdị vidiyo YouTube nke ga - enyere aka itolite obere azụmaahịa gị | Martech Zone
10 Videosdị vidiyo YouTube nke ga - enyere aka itolite obere azụmaahịa gị
Fraịde, Machị 12, 2021 Fraịde, Machị 12, 2021 Ashley Murphy
Enwere ihe na YouTube karịa pusi vidiyo ma daa mkpokọta. N'ezie, enwere otutu ihe. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ azụmaahịa ọhụrụ na-achọ ịwelite mmata ma ọ bụ kwalite ahịa, ịmara etu esi ede, ihe nkiri, ma kwalite vidiyo YouTube bụ ihe dị mkpa Nkà ahịa ahịa narị afọ nke 21.
Chọghị nnukwu mmefu ego iji mepụta ọdịnaya nke na-agbanwe echiche n'ime ahịa. Naanị ihe ọ na - ewe bụ ama na aghụghọ ole na ole nke azụmaahịa ahụ. Ma inwere ike imuta otu esi eme ya, ya bu isi okwu ya na Headway Capital 10 vidio vidio YouTube nke obere oru obula kwesiri inwe.
Kedu ihe kpatara Vidio YouTube maka azụmahịa gị?
Ndị ụlọ ọrụ ndị na-asọpụrụ ike nke YouTube na-ekpughe onwe ha na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ ịntanetị niile. A na-eme atụmatụ na ihe karịrị ijeri mmadụ abụọ na-eleta YouTube kwa ọnwa, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-abanye kwa ụbọchị. Ihe ọzọ bụ, mgbe Google gasịrị, YouTube bụ injin nyocha nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa. Nke ahụ mere ka ọ bụrụ otu n'ime ebe mbụ ndị ahịa nwere ike ịga mgbe ha na-achọ ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ.
Karịsịa, vidiyo YouTube nke ọma ga-eme ka ndebanye aha gị na ahịa gị. Nnyocha site na Headway Capital chọpụtara na 73% nke ndị mmadụ yikarịrị ịzụta ngwaahịa mgbe ha kirisịrị ngosipụta ma ọ bụ nyochaa vidiyo. Na mkpokọta, vidiyo vidiyo na-eme ka ohere ịzụta zụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 150%.
Kdị ofdị Vidio YouTube Kwesịrị Businesszụ Ahịa Gị?
Know ma ihe kpatara ị ga - eji mee vidiyo YouTube. Yabụ ugbu a ọ bụ oge iji kpebie ụdị vidiyo a ga-eme.
Nwere ike iji vidiyo ngwa ahịa kwụ ọtọ kwụ ọtọ. Nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji gosipụta ngwaahịa ọhụrụ ma gosipụta atụmatụ ya na uru ya.
Olee otú-Iji vidiyo bụ nhọrọ ọzọ. Dị ka vidiyo vidiyo, Olee otú ọdịnaya na-eme ka ndị ahịa hụ ngwaahịa na ọrụ, na-enye ha obi ike na ọ na-arụ ọrụ mgbasa ozi. Ha na-anọchi anya ọmarịcha ọrụ ndị ahịa ma belata isi esemokwu na azụmaahịa gị. Otinggbanye vidio vidio demo dị ezigbo ọnụ karịa ị nweta ndị ọrụ ise iji kpọọ oku ma ọ bụ zaa ozi ịntanetị n'aka ndị ahịa.
Vidio akaebe na-egosi ndị mmadụ n'ezie ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike na-ekwupụta afọ ojuju ha na ngwaahịa gị. Kinddị ọdịnaya a na-eme ka e nwee obi eziokwu na ntụkwasị obi. Ndị mmadụ yikarịrị ịzụta ngwaahịa dabere na nkwanye sitere n'aka ndị ọgbọ ha ma ọ bụ onye na-ekenye ụkpụrụ ha ma ọ bụ nhọrọ ndụ ha.
N'ikpeazụ, e nwere vbox na ịzụ ahịa vidiyo. Vidio ndị a na-eme ka obi dị ụtọ na atụmanya metụtara ọhụụ ọhụrụ.
Dịkwa ka ezigbo onye mgbasa ozi (ma ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme mkpọsa) ga-agwa gị, anyị bụ ụmụ mmadụ abụghị ndị nwere ezi uche dịka anyị ga-achọ iche. Kama, anyị na-achọkarị na-eme mkpebi dabere na mmetụta uche kama eziokwu siri ike. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike kpalie mmetụta ndị na-ege gị ntị, ị yikarịrị ka ị gbanwee ha ka ha bụrụ ndị na-akwụ ụgwọ.
Otu esi eme ọdịnaya YouTube nke na-arụpụta nsonaazụ?
Ihe mbụ ị ga - achọ bụ ụfọdụ kit. Mana ikwesighi imebi akụ n’ụlọ oke ọnụ ọkụ ọkụ. Offọdụ n'ime YouTubers na-aga nke ọma na-adọta ọtụtụ nde echiche kwa izu na-enweghị ihe ọ bụla karịa ezigbo ama na sọftụwia na-edezi. Maka vidiyo ndị dị mgbagwoju anya, enwere ọtụtụ ndị okike ọdịnaya na ụlọ ọrụ dijitalụ ga-agbapụ ma mepụta ọdịnaya gị.
I chokwara a script. Nke a nwere ike bụrụ otu akụkụ kachasị mkpa nke ụdị ọdịnaya ọ bụla. A edemede na-ewuli usoro; ọ na-ewe onye na-ekiri ya na njem, na-akpali mmetụta ha n'ụzọ ma na-eduzi ha gaa otu ihe, dị ka ịga na weebụsaịtị ma ọ bụ zụta.
Ihe ederede agaghị enwe mgbagwoju anya. Naanị ilekwasị anya na usoro ihe omume atọ: ọnọdụ, esemokwu, ma ọ bụ mkpebi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịchọrọ mmalite, etiti, na njedebe.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ire mgbapụta igwe eji agba n’aka, akụkọ ahụ nwere ike gaa otu a:
Guy na-aga ịnya ịnyịnya ígwè n'ọhịa (ntọala), mgbe ahụ ọ ga-enweta taya dara ada ma rapaara ya n'oké ọhịa (esemokwu), mgbe ahụ, ọ dọpụtapụta mgbapụta ịnyịnya ígwè ya, kpoo taya ahụ, ma jiri obi ụtọ na-aga na ọdịda anyanwụ (mkpebi ). Ihọd na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịbụ onye ndu, mana ezigbo kpakpando nke ngosi ahụ bụ mgbapụta igwe kwụ otu ebe.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka otu esi eme vidiyo YouTube.
Tags: n'azụ vidioika vidiyovidiyo ecommerceisi obodovidio influencerinfographiczute otu vidiyongwaahịa nyochaa vidiyongwaahịa vidiyo vidiyombanye videoszụọ ahịa vidiyoobere vidiyo vidiyoSMBakpa akwukwovidiyo nke akaebeụdị nke YouTube videounboxing vidiyovideo oku na-aga-edinamvideo akavideo ọkụederede vidiyovideo akụkọvideo Atụmatụụda oluihe omuma youtubemetric youtubeyoutube tọmbneelụyoutube videoEderede vidiyo YouTubeYouTube vidiyoOlu olu YouTube
Ashley Murphy gụsịrị akwụkwọ na BA (Hons) na Bekee Literature na Creative Writing na Mahadum Manchester. Ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye edemede ọdịnaya na-enweghị akwụkwọ na 2015. Ọ bụ ọkachamara na nkà na ụzụ, agụmakwụkwọ ka elu, akwụkwọ mgbasa ozi, ihe ndị dị ugbu a, na ịzụ ahịa.
Hygiene Data: Ntuziaka Ndenye Iji Jikọọ data mkpochapụ